धेरै त गरेको छैन् ! तर मलाई सिम्पल पोज मन पर्छ सबिना!
काठमाडौँ। सामाजिक संजालमा बिभिन्न रोमान्सका कुरा गरेर चर्चामा आएर चर्चित बनेकी गायिका हुन सबिना सबु । उनले केही समय अगाडी मात्र एउटा गित बजारमा सार्बजनिक गरेकी पनि थिईन । गित पनि गाउने, रोमान्सका र यौनका बारेमा रमाईलो कुरा गर्ने सबिना सबु मोडल पनि हुन । उनले आफुलाई हट केक भनेर पनि चिनाउछिन ।
आँखामा हल्का मेकअपका साथमा ओठमा गहिरो रङको लिपस्टिकबाट आफूलाई बोल्ड देखाउन सकिन्छ । महिलाको छालामा रगत गाढा देखिन्छ भने गहिरो सेड भएको लिपस्टिक छनोट गर्नुपर्छ । रातो, रानी रङको लिपस्टिकको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । लिपस्टिक लगाउँदा अनुहारको ब्राइटनेसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । *भिडियो हेर्नुहोस*
Previous ठूला भ्रष्ट्राचार काण्डकाे छानविन गराैँ, १६५ सांसदको समर्थन केका लागि ? : काेमल वली